> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Audio in MP4 / MKV ka AC3 in AAC
Audiotracks AC3 la jira karaa weelasha qaab oo kala duwan, sida MP4, iyo MKV, iwm Videos la AC3 audio aan lagu ciyaari karin in QuickTime, Lugood, iyo sidoo kale iPad / iPhone / iPod / Apple TV, iwm, laakiin warbaahinta kuwaas ciyaartoyda aqrisan kara kuwan raadkaygay AAC. Taasi waa sababta dad badani u doonayaan si loogu badalo audio ee MKV ah (ama MP4, iwm) ka AC3 in AAC. Haddii aad sidoo kale u baahan tahay si loogu badalo AC3 in AAC, aalad awood iyo xirfad kaa caawin karaan inaad shaqo this si fudud oo dhaqso sameeyo.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxaa si gaar ah loogu tala galay in loogu badalo wax video oo caan ah iyo files audio. Waxaad ka bedeli kartaa oo keliya ma aad video & files audio ka mid ah qaabka weelka in kale, laakiin sidoo kale si fudud u beddeli wadada audio aad video files si kuwan raadkaygay kale audio. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka weyn si loogu badalo AC3 files audio in AAC files audio, iyo sidoo kale loogu badalo AC3 track audio in AAC track audio iyadoo qaab video ama la beddelo qaab video ah.
Hoos waxaa ku qoran, Waxaan idin tusin doonaa hage ah oo faahfaahsan. Waa wax fudud, oo kaliya saddex tallaabo oo fudud.
1 Load videos files leh codec AC3 ama AC3 files audio
First of dhan, waxay helaan files videos ay ku jiraan audio AC3 kuwan raadkaygay aad kombuutarka, ka dibna si toos ah jiidi faylasha aad rabto in aad ka computer si ay leeg- tahay diinta this software ee. Dabcan, waxaa jira hab kale oo aad isticmaali karto si aad u dajiyaan video files. Just si fudud riix badhanka uu furmo suuqa barnaamijka. Wixii AAC files audio, waxaad isticmaali kartaa si la mid ah si ay u dajiyaan.
2 Dooro sida goob wax soo saarka AAC
Hadda, waxaad u baahan tahay in ay doortaan qaab wax soo saarka ah. Fur liiska hoos-hoos qaab ku saabsan "Qaabka Output" guddi, oo waxaad u tagtaan "qaab"> "Video" in ay doortaan MKV ama MP4 sida qaab wax soo saarka. Next, u tag salka "Qaabka Output" guddi, ka dibna riix "Settings" doorasho. In ka pop-up "Dejinta" window, waxaad sameyn kartaa sida AAC encoder maqal.
Haddii aad soo dhoofsadaan AC3 files audio in tallaabo 1, kaliya aad u baahan tahay inaad doorato "Qaabka"> "Audio"> "AAC" in ay liiska qaabka wax soo saarka.
3 Beddelaan AC3 in AAC
Ugu dambeyntii, riix "Beddelaan" button ee geeska gacantiisa midig hoose ee suuqa si ay u bilaabaan AC3 in ay diinta ka AAC. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa bar cagaaran horumarka diinta. Muddo ka dib, dhammaan hawlaha diinta la completetd doonaa. Markaas, aad si toos ah u riixi kartaa icon galka hoose ee suuqa kala this si ay u helaan, kuwaas oo files gediyay. Hadda, bal iska raaxayso, oo kaliya.
Sidee Waraaqda Audio From DVD A
Talinayo Video qaabab LG Optimus
Sida loo dalbado Jump jarid in Click ah